Ulwaphulo-mthetho li-alibi elifanelekileyo ekupheliseni imali kunye nokulawula ngokupheleleyo abantu: uMartin Vrijland
Ulwaphulo-mthetho li-alibi elifanelekileyo lokupheliswa kwemali kunye nokulawula ngokupheleleyo abantu
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Julayi 2019	• 6 Comments
Ukuphazamiseka, imali yeziyobisi, uthathwe uFrraris kunye neWalorghinis, izigulane zithuthuthu ezenza ukuhlaselwa "kwiindaba ezizimeleyo" kwaye zibulale. I-Netherlands yilizwe laseNtshona West! Kuyingozi kakhulu, kuba ngaphezu kwezo zonke ii-jihadists ezibuyisayo kunye neziganeko ezikhuphayo, ii-ATM zivutha rhoqo emoyeni kwaye iibhanki zizama ukuqhubeka nazo zonke iinkqubo zokuthungula imali. Enyanisweni, ilizwe laseDutch lilahlekelwe ngokupheleleyo kwaye yingakho sifuna amandla amaninzi okuphanda ebhanki, abantu abaninzi kufuneka baqeshwe kwiinkonzo kwaye emva kokuba sihlale siphile ngokuvuyisayo kwilizwe le-tulips, izixhobo zomoya kunye nezidakamizwa ezilula. ukusetyenziswa kwezi zintengiso zeefesi.
Ubawazi amaqhinga. Umthengisi wamathayitha ochitha ikhonkwane kwiindlela zokufikelela; urhwebo lweglasi eqesha amakhwenkwe ambalwa kwilizwe laseMpuma yebhokisi le-bloc ukuba afake iifestile; umthengisi wekhamera yokhuseleko olungiselela ezinye izigubha. Awazi na? Khangela bhekani, ngoko unokubukela iphephancwadi kunye neTV kunye nokukholelwa konke ovelayo uze ubone. Unokuzicwangcisa ulwaphulo-mthetho ngokwakho, ukuze udale ingxaki kwaye ubangele ukwesaba kubantu kwaye emva koko isisombululo kuza. Yaye ukuba ubonisa iimoto ezithengisa kakhulu kwiimidiya zeendaba kunye nomsindo wabantu abaphulaphuli abaneendawo ezinqabileyo zezindlu kunye nama-yachts, wenza abantu babe nomona kwaye bacaphuke ngexesha elifanayo, ngoko udale indawo yokuzalisa ngokugqibeleleyo yemilinganiselo echaphazelayo bonke abantu.
Ngokuqinisekileyo ufuna ukuba yonke loo mali yezobugebengu ilandelwe, kuba usebenza kanzima kuleso sinye sesonka kunye nokudlala okugqithiseleyo kukugcina ujabule kwaye uhleli. Ngoko awuyithandi ukuba izigwenxa zibaleke ngokulula ngeemoto ezinkulu kunye nobomi obuhle. Ukukhangela ukuba urhwebo! Yaye leyo mali kufuneka ichithwe ngenxa yale nto okanye ukuba yonke into ibhekiselele kwiibhanki kunye noorhulumente? Mkhulu! Yenza oko! Emva koko, akukho nto yokufihla. Ngoko siya kwintlalo engaxhamliyo (i-society cashless) apho yonke into oyenzayo icacile.
I-blockchain kwaye mhlawumbi i-bitcoin-efana nemali yelizwe lonke iya kunika isisombululo! Ukuba sidibanisa ukuba kunye nenethiwekhi ye-5G kunye 'ne-intanethi yezinto', ke yonke ikhukhi, yonke i-steak kunye nayo yonke i-moped oyithengayo iya kulandelwa; Indlu yangasese ehlakaniphile iyazi ukuba uninzi kangakanani u-peop kunye ne-pee kwaye u-state uyazi kakuhle oko udlayo; oko kungena naphandle. Oku kusebenzayo, kuba i-premium yakho yomshuwalense inokunyuka xa ushiya umsila ngasese u-Monsanto oguqulwayo kunye nomhlaba onelungelo lobunikazi ukhula kwaye ungcolise imiphunga yakho okanye ukuba isibindi sakho sikhula ngenxa yokuba uyayidla ngasese ibhotile ye-1 yewayini ngosuku. Ulawulo olupheleleyo lwabantu, ukusetyenziswa kwalo, ukuchitha kunye nokuthenga iipateni yindawo efanelekileyo yokulawula umbuso. Ngethamsanqa siqhubeka siyibiza ngentando yeninzi kwaye siyaqhubeka sikholelwa ukuba kulungile kuthi. Akukho nto engalunganga ngokulawulwa ngokupheleleyo kwabantu. Emva koko, oko kuhamba kakuhle eChina!
Yaye ukuba kukho imithetho nemimiselo emininzi oya kuphula umthetho othile kwindawo ethile encinci, uhulumeni unokuqinisekisa ukuba awukwazi ukuthenga nto. O kuhle, umele uve ngeyo ncwadi enjalo. Ngokomzekelo weGeorge Orwell umzekelo (1984) okanye kuloo bhayibhile (inkqubo yezilwanyana). Nangona kunjalo, sikhetha ukuhlala sithandana kunye nethemba. Nathi yonke into iya kuhlala ilungile, ngokuba siNetherlands! Orange, uyazi! Izwe likaMax Verstappen, ibhola lebhola, i-DJs engcono, imikhosi engcono, iiklabhu kunye nemivalo yaselwandle. Ilizwe elinokuhambisa umongameli olandelayo we-EU! Singaphezulu! Ngoko ukuba sele sele iqine kakhulu nathi, kulungile. Masibe nethemba loMphathiswa wethu njengomzekelo kwaye sihlale sithandaza! Kuya kulungile; nokuba libukeka lusizi! Qhubeka uthemba kwaye vumela konke kwenzeke kuwe.
Kwaye ukuba ukholwa ukuba iNkosi uYesu yafela kuwe esiphambanweni, yonke into iya kuba yinto enhle; konke okufuneka uyenze ukuhlala kunye nokudibanisa namanye ama-pacifists abaya kuvunyelwa ukuba bahlale kufuphi nawe neNkosi. Ungesabi, ungenzi nto: kholwa kuphela. Qhubeka ugcwalisa isikhwama sokuqokelela esikolweni.
okungena kwikhonkco: telegraaf.nl
Indlela uwonke uyazi ngayo ngokuqinisekileyo ukuba ungubani, yintoni oyenzayo, uthenge kwaye uthengise
Abanikezeli bemali be-Crash, Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo kuluntu olungenasiphelo
I-Grapperhaus ithembisa ukuba "i-press" ezizimeleyo "i-inviolability
tags: ku pheliswa, i-cashless, imali, eziziimbalasane, Ferrari, imali, kuthathwe, Grapperhaus, ukuthatha, Lamborghini, ngumphathiswa, ku qhekeka, Society
1 Julayi 2019 kwi-13: 12
Mnu Vrijland, ndicinga ukuba ukuphawula kwakho kokugqibela kunzima kakhulu. Akukukhathazi. Kubuhlungu ukuba awukhulumi ngamakholwa amaninzi kuYesu Kristu, olwa imfazwe enkulu kwiindawo zasezulwini ngoMoya oyiNgcwele, engayithandi ubomi babo. Akubona wonke umntu obizwa ngokuba ngumsebenzi ofanayo. Musa ukugweba.
Ngendlela, ndiyayixabisa kakhulu umsebenzi wakho kunye nenhlonipho ngemibingelelo oyenzile ukuveza ubuxoki.
1 Julayi 2019 kwi-13: 35
Ngaba ungazichazela ukuba ndilwa? Kutheni sisadingeka silwe namazwe asezulwini xa zonke izinto sele zigqityiwe kwaye i-ajenda sele ichanekile (ngokweziprofeto)? Okanye ingengomcimbi othile?
Ndicinga ukuba inkolo igcina abantu kwimodi yekhoboka elithembekileyo apho abelusi banceda ukukhusela intsapho yenkosi kunye nentando yenkululeko ("yamiselwa nguThixo").
Inkolo inikezela, ngaphezu kwezopolitiko, ukudibanisa kunye nokunciphisa i-polarization kuyimfuneko yokuzisa isicatshulwa seLuciferian.
1 Julayi 2019 kwi-13: 44
1 Julayi 2019 kwi-14: 34
Ndikulindele ukufumana ubungqina obuvela kuwe ukuba "uKristu" wayekho. Ngenxa yokuba akukho! 'i-christ' njenge-placebo okanye uzive ulungile akwanele kum. Vele uhlalutye kuwo kwaye ngubani na umntu owenza 'uKristu'. Ewe, ngubani oya kuba ngoku. Amaxesha e-10 ukuqagela.
1 Julayi 2019 kwi-20: 59
Ngokuchanekileyo, kunzima kakhulu ukuya kwi-100% yemali yedijithali.
Xa sibona indlela abantu abadala abadala abasabela ngayo kwiqela leSinterklaas, lithetha ngokwaneleyo. Akukho phando lwenziwa. Ekuqaleni iSinterklaas okanye iSanta / uSathana uvela eBhabhiloni kunye nabancedi abamnyama yiidemon ezihamba ngeenkumbi. Ukuba uyabanika imibingelelo, baya kuthemba ukuba bayaqhubeka okanye ukuba ubeka igazi emnyango wakho njengaseBhayibhileni.
Uvumela abantwana bakho bakholwe ebuxoki ukususela ebuntwaneni, bebethuse ngokungabonakali xa bengabonakali. Akunamnandi ngenxa yoxinzelelo kunye nobudenge bubuqili!
Sifanele sizukise izithethe kuba ipholile!
Unokuphinda uququzelele amaqela ngaphandle kwimihla yobugqi. Iholide zethu ziphikisiwe kwaye ziququzelelwe yi-lullo's occult ehleka kwiincindi zabo kuba sibalandela ngokungahambi kakuhle.
Ukuba umntu uthetha okuthile malunga naloo nto, wayecinga ukuba wayonakalisa umoya.
Ndiyaxelela abantwana bam kuba bekwazi ukuthetha ukuba uSanta Claus uyisidenge esifihlakeleyo kwaye asinathathi nxaxheba kuloo maqela angamaqhawe.
Ndiyabatshela ukuba bonke abanye bahluke kunokuba baxelelwa kuyo yonke indawo.
Wena ungumalusi wakho, asikho izimvu!
Ndinguye mna mna kwaye ufana noYesu umalusi olungileyo 😉
2 Disemba 2019 kwi-19: 52
Uqikelelo luvela kuMartinVrijland, uSuku lweXesha!
Kwaye Guppy, ulungile kum, awuwedwa
Yintoni esimele siyenze? ukuguquka; iletisi yengubo? Ndicinga ukuba yeyona ndlela yokuphuma, yokutshintshana
Ibhanki ngoku (isenokuba) iseta iakhawunti yakho kwi-zero ukuba awuthetheli ngokwesini, iimakrofoni zekhamera yonke indawo.
« Isivumelwano sesimo sezulu: ukuba abantu ngebhokisi elihle
Ingqondo yomdatshi waseDutch iswele phantsi: inobuthakathaka kwaye ingenzi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.129.882
Riffian op ECanada: UTshayina uGqr. I-Xiangguo Qiu kunye neWuhan yintsholongwane yokulwa imfazwe ukuze iChina ixhomekeke kwiChina kwisisombululo
Hare op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey